အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကို တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကို တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
October 12, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့် Tropical Storm(TS) ဖြင့် ဟိုင်နန်ကျွန်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသည့် PARMA သည် လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်ပင်လယ်ကွေ့(Gulf of Tokin) သို့ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့် တစ်နာရီလျှင် ၆၅ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၄ဝ နှုန်း)ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၉ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး ယခုသတင်းရေးချိန်အထိ ဟိုင်နန်ကျွန်းအားဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း၏အချင်းမှာ ၂၅ဝ နော်တီကယ်မိုင် (၄၆၅ ကီလိုမီတာ) ရှိပြီး မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့်မှာ ၁၂ ပေအထိရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင် မိုးရေချိန် ၂ဝဝ မီလီမီတာမှ ၄ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လက်မ မှ ၁၅.၇၅ လက်မ ခန့်)အထိ ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း T2K မှ နောက်ဆုံးရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Time/Date: 6:00 PM PST Mon October 12 2009
Location of Center: 19.8 N Lat 109.6 E Lon
Distance 1: 35 km (20 nm) N of Danzhou, Hainan Is.
Distance 2: 80 km (43 nm) WSW of Haikou, Hainan Is.
Distance 3: 115 km (63 nm) WNW of Qionghai, Hainan Is.
Distance 4: 180 km (97 nm) North of Sanya, Hainan Is.
Distance 5: 420 km (227 nm) ESE of Hanoi, Vietnam
Projected Area of Impact: Gulf of Tonkin-Vietnam
Wunder TrackMap (for Public):2PM PST Mon Oct 12
JTWC Ship Avoidance TrackMap:2PM Mon Oct 12
Multi-Agency Forecast TrackMap:2PM Mon Oct 12
« PARMA ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဝင်တော့မည်